सेप्टेम्बर 20, 2018 सेप्टेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments औषधी, डा. राम बहादुर बोहरा
बिरेनुनबारे नजानेको शायद को होला भन्ने कुरा यहाँ लेख्नु नपर्ने देखिन्छ । आज आधुनिक औषधीले सबैको दिमागबाट बिरेनुनलाई हटाइदिएको छ । औषधिको दुनियाँमा बिरेनुनलाई प्रमुख औषधीको रूपमा मानिएको छ ।
बिरेनुन पहिले-पहिले गाउँघरतिर घरका साना-साना केटाकेटीको पेट घोच्दा वा दुख्दा आफ्ना नानीहरुलाई बिरेनुन चुस्न दिने गर्दथे । अपचका कारण केटाकेटीलाई झाडापखाला लागेमा पनि बिरेनुन सहितको पानी बनाएर औषधीका रुपमा दिने गर्थे । तर यो घरेलु ओखतीको ठाउँ आजभोली आधुनिक औषधीले दिइसकेको भएतापनि बैज्ञानिकहरुले बिरेनुनमा दर्जनौ रोगहरुबिरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता रहेको औंल्याएका छन् ।
अनुसन्धानले के देखाएको छ भने बिभिन्न थरिका रोग निको पार्न बिरेनुन संसारमा सबैभन्दा उत्तम नुन साबित भएको छ । प्राचिन काल देखिनै मानव सभ्यतामा बिरेनुनलाई अति मूल्यवान मानिदै आइएको छ । आज मैले बिरेनुन बाट सम्मपुर्ण पेटको रोग निको बनाउन बिरेनुनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे प्रकास पार्न गइरहेको छु । एक गीलास हल्का मनतातो पानीमा एक चुट्की बिरेनुन राख्नुहोस र राखेको बिरेनुनलाई घटाघट पिउनुहोस पेट सम्बन्धित सम्पुण रोग निको हुन्छ ।
← प्रकृति र यसको लिला
के मानिसको तीनवटा आँखा छन् ? →
3 thoughts on “विरेनुन र यसको प्रयोग”
Pingback:बेसार र यसको प्रयोग | Science Infotech
Pingback:तरकारीमा नुन चर्को हुँदा के गर्ने ? तरकारीमा भएको चर्को नुन घटाउने अचुक उपायहरु